Kuningi esesikwenzile: Zuma – LIVE Express
Kuningi esesikwenzile: Zuma
uMengameli we-African National Congress (ANC), u-Jacob Zuma, uthi bewuhulumeni waleli qembu elibusayo kuleli kuningi kakhulu asebekuzuzile selokhu bathatha izintambo zombuso kusukela ngonyaka ka-1994.
Uthi uhulumeni wasekhaya ubaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi izidingo ziyafinyelela kubantu njengoba kuyiwo osondelene nabantu.
Beyi-ANC uthi sebezizwile izikhalo zabantu ngendlela okukhethwa ngayo amanye amakhansela wathi yingakho nje uhlelo lwabo lokuqoka amakhansela selubandakanya nomphakathi. Uthi lokhu sekubasizile ekutheni bakwazi ukuthola abantu abasezingeni eliphezulu ukuze kube yibo abamela i-ANC emphakathini.
Uphinde wathembisa ngokuthi bazoqinisekisa ukuthi amakhansela e-ANC ayabonakala emphakathini futhi awubikele umphakathi ngezinhlelo eziqhubekayo zentuthuko ngokuthi abambe imihlangano nayo imiphakathi.
Ube esenxusa umphakathi ukuthi uwacebe kule nhlangano amakhansela e-ANC uma engenzenga kahle. Uthi kwezinye izindawo sebewakhiphile amakhansela abengenzi kahle ukuze bafake lawo azokwenza kahle.
uZuma uzwakalise ukuthi beyiqembu elibusayo bajabule ngokuthi bakwazile ukugcina izithembiso eziningi ababezenzile ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya olwedlule ngo-2011.
“Imizi eminingi ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini isifakelwe ugesi. Abahlupheka kakhulu abawukhokheli ugesi uma bebhalisa kaMasipala, bathole imvume. Impilo isingcono kakhulu kubantu bakithi ngenxa yahulumeni ka-ANC, esebenza ebambisene kanye nabantu,” kusho uZuma.
Uqhube wathi kuningi futhi asebekwenzile ukuqinisekisa ukuthi abantu bayakwazi ukuthola amanzi emakhaya.
Usomqulo we-ANC wethulwe e-Nelson Mandela Stadium, e-Port Elizabeth, e-Eastern Cape, ngoMgqibelo.
Ukhetho lokuhumeni basemakhaya luzoba mhla zintathu ku-August 2016.